1 Tantara 4 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 4
Ny taranak'i Jodà sasany - Ny taranak'i Simeona.
1Zanakalahin'i Jodà: Faresa, Hesrona, Karmì, Hora sy Sobala. 2Raià zanakalahin'i Sobala, niteraka an'i Jahata; Jahata niteraka an'i Akamaia sy Lahada. Ireo no fokon'ny Sareana.
3Izao avy no avy amin'ny rain'i Etama: Jezrahela, Jesema, sy Jedebosa, ary Asalelfoni no anaran'ny anabavin'ireo. 4Fanoela no rain'i Gedora, ary Ezera no rain'i Hosa. Ireo no zanakalahin'i Hora, lahimatoan'i Efratà, rain'i Betleema.
5Nanambady roa Asora, rain'i Tekoe, dia Halaà sy Naarà, 6ka ny naterak'i Naarà taminy dia Oozama, Hefera, Temanì ary Ahastarì: ireo no zanakalahin'i Naarà. 7Ny zanakalahin'i Halaà dia Sereta, Isaara sy Etnàna.
8Kaosa niteraka an'i Anoba sy Sobobà, ary ny fokon'i Aharehela, zanakalahin'i Aroma. 9Nomena haja noho ny rahalahiny Jabesa ary nataon-dreniny hoe Jabesa ny anarany, fa hoy izy: nijaly aho no niteraka azy. 10Niantso an'Andriamanitr'Israely Jabesa nanao hoe: Raha mitahy ahy hianao, ka halalahinao ny faritaniko, ary momba ahy ny tànanao, sy arovanao amin'ny loza aho mba tsy ho zoim-pahoriana... Ary nomen'Andriamanitra azy izay nangatahiny.
11Keloba rahalahin'i Soà niteraka an'i Mahira, rain'i Estona; 12Estona niteraka ny fokon-dRafah, Fesè sy Tehinnà, rain'ny tanàna Naasa. Ireo no olona ao Rekah.
13Zanakalahin'i Seneza: Othoniela, Saraià. Zanakalahin'i Othoniela: Hatata sy Maonatì. 14Maonatì niteraka an'i Ofrà; Saraià niteraka an'i Joaba, rain'ny ao an-dohasahan'i Karaskima, fa mpiasa izy ireo. 15Zanakalahin'i Kaleba, zanak'i Jefone: Hira, Elà, ary Mahama. Zanakalahin'i Elà: Seneza.
16Zanakalahin'i Jaleleela: Zifa, Zifà, Tirià ary Asraela.
17Zanakalahin'i Esrà: Jetera, Mereda, Efera, ary Jalòna. Ilay Ejipsiana novinadin'i Mereda, niteraka an'i Mariama sy Sammaì ary Jesbà, rain'i Estamao. 18Ilay vehivavy jody vadiny anankiray, niteraka an'i Jareda, rain'i Gedora, sy Hebera, rain'i Sokao, ary Ikotiela, rain'i Zanoe. Ireo no zanakalahin'i Betià, zanakavavin'i Faraona, nalain'i Mereda ho vady.
19Zanakalahin'ny vadin'i Odaià, anabavin'i Nahama: ny rain'i Keilà, ilay Garmiana, sy ny rain'i Estamao, ilay Makatiana.
20Zanakalahin'i Simona: Amnona, Rinnà, Ben-Hanàna ary Tilòna. Zanakalahin'i Jesì: Zoheta sy Ben-Zoheta. 21Zanakalahin'i Selà, zanak'i Jodà: Hera rain'i Lekà; Laadà rain'i Maresà, sy ny fianakaviana amin'ny fokon'ny mpanao biso sy amin'ny fokon'i Askebea, 22sy Jokima ary ny olona ao Kozebà sy Joasa sy Sarafa izay samy nanapaka tany Moaba, sy Jaskobi-Lekema. Zavatra efa ela izany. 23Ireo no mpanefy vilany sy mponina tany Netaima sy Gederà, nonina teo anilan'ny mpanjaka izy, dia niasa ho azy.
24Zanakalahin'i Simeona: Namoela, Jamina, Jariba, Zarà, Saola, Seloma zanany, 25Mapsama zanany, Masmà zanany. 26Zanakalahin'i Masmà: Hamoela zanany, Zakora zanany, Semeì zanany. 27Semeì nanan-janaka enina ambin'ny folo lahy sy enim-bavy; nanan-janaka lahy maro ny rahalahiny, ary tsy nitombo toy ny zanak'i Jodà ny fianakaviany rehetra. 28Ny nonenan'izy ireo dia tao Bersabea, tao Moladì, tao Hasar-Soala, 29tao Balì, tao Asoma, tao Tolada, 30tao Batoela, tao Hormì, tao Sikelega, 31tao Beta-Markabota, tao Hasar-Sosima, tao Beta-Beraì ary tao Saarima: ireo no tanànany aman-jana-bohiny, hatramin'ny andro nanjakan'i Davida. 32Azy ireo koa Etama, Aena, Remmona, Tokena sy Asana, tanàna dimy, 33mbamin'ny zanabohiny rehetra izay tao amin'ny manodidina an'ireo tanàna ireo, hatrany Baala. Ireo no fonenany, sy ny taratasy tetiaram-pirazanan'izy ireo.
34Mosobaba, Jemleka, Josì, zanakalahin'i Amasiasa, 35Joela, Jehò, zanak'i Josabiasa, zanak'i Saraiasa, zanak'i Asiela, 36Elioenaì, Jakoba, Isohaià, Asaià, Adiela, Ismiela, Banaia, 37Zizà, zanak'i Sefeì, zanak'i Alòna, zanak'i Idaià, zanak'i Semrì, zanak'i Samaià. 38Ireo lehilahy voatonona amin'ny anarany ireo, dia samy filohany amin'ny fianakaviany avy; nitombo fatratra ny fokom-pianakaviany, 39ka nankany amin'ny hadilalan'i Gadora izy, hatrany amin'ny ilany atsinanana amin'ny lohasaha, mba hitady tany fiandrasam-biby ho an'ny biby fiompiny. 40Dia nahita tany fiandrasam-biby lonaka sy tsara izy, tany malalaka, mandry fahizay sy miadana; taranak'i Khama ny mponina tao fahataloha. 41Tamin'ny andron'i Ezekiasa, mpanjakan'i Jodà, no nahatongavan'ireo olona voasoratra anarana ireo. Noravany ny lain'izy ireo mbamin'ny Maonita hitany tao, ka nony efa nataony anatema mandrak'androany, dia izy ireo no nisolo toerana azy, nonina teo, satria nisy ahitra ho an'ny biby fiompiny tao.
42Nisy taranak'i Simeona koa, diman-jato lahy no isany, nankany amin'ny tendrombohitra Seira. Faltiasa, Naariasa, Rafaiasa, ary Oziela, zanak'i Jesì, no filohan'ireo. 43nandresy ny Amalesita sisa afa-nandositra izy ireo dia niorom-ponenana teo mandrak'androany. >